Iindaba -Izibonelelo zoQoqosho kunye neNdalo esingqongileyo yokuPakisha okuThuthwayo okuSebenzayo NGU RICK LEBLANC
Eli linqaku lesibini kuthotho oluneenxalenye ezintathu nguJerry Welcome, owayesakuba ngumongameli woMbutho weePakeji ezinokuphinda zisetyenziswe. Inqaku lokuqala lichaze ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nendima yayo kukuthengisela. Inqaku lesibini lixoxa ngezibonelelo zoqoqosho nezokusingqongileyo zokupakishwa kwezothutho ezinokusetyenzwa kwakhona, kwaye inqaku lesithathu liza kubonelela ngeeparameter kunye nezixhobo zokunceda abafundi ukuba babone ukuba kuyanceda na ukutshintsha konke okanye ezinye zenkampani zisebenzisa ixesha elinye okanye zingaphathanga kangako. inkqubo yokupakisha yothutho enokuphinda isebenze.
Nangona kukho izibonelelo ezibonakalayo zokusingqongileyo ezinxulunyaniswa nokupakisha okusebenzayo okusebenzayo, uninzi lweenkampani luyatshintsha kuba lubongela imali. Ukupakishwa okusebenzayo kokuhambisa kunokunyusa umgca weenkampani ngeendlela ezininzi, kubandakanya:
Ukuphuculwa kwe-ergonomics kunye nokhuseleko lwabasebenzi
• Ukuphelisa ukusikwa kwebhokisi, ukutya okotyiweyo kunye neepelethi ezaphukileyo, ukunciphisa ukonzakala
• Ukuphucula ukhuseleko lwabasebenzi ngeziphatho eziyilwe ngokwe-ergonomic kunye neminyango yokungena.
• Ukunciphisa ukwenzakala emqolo ngeesayizi zokupakisha eziqhelekileyo kunye nobunzima.
• Ukuququzelela ukusetyenziswa kweeraki zorhwebo, iirock zokugcina, ukuhamba kweeracks kunye nezixhobo zokuphakamisa / zokuthambisa ezineekhonteyina ezisemgangathweni
• Ukunciphisa isiliphu nokwenzakala kokuwa ngokususa inkunkuma esesizalweni, enje ngezixhobo zokupakisha ezilahlekileyo.
• Umonakalo omncinci wemveliso wenzeka ngenxa yokusilela ekupakisheni iipakethe.
• Ukuqhuba okuthe kratya kweetraki kunye nokulayishwa kwezibuko kunciphisa iindleko.
• Izikhongozeli ezikhutshwe ngumoya zinciphisa ixesha lokupholisa izinto ezinokutsha, ukwanda kokutsha kunye neshelf-life.
Ukupakisha iindleko zokunciphisa iindleko
• Ubomi obude obusebenzayo bokupakisha kwezothutho obunokusetyenziswa bukhokelela kwiindleko zezinto zokupakisha zepennies kuhambo ngalunye.
• Iindleko zokupakishwa kwezothutho ezinokusetyenzwa kwakhona zinokunwenwa kwiminyaka emininzi.
Ukunciphisa iindleko zolawulo lwenkunkuma
• Inkunkuma encinci yokulawula ukusetyenziswa kwakhona okanye ukulahlwa.
• Ukuncipha kwabasebenzi kufuna ukulungiswa kwenkunkuma ukuze iphinde isetyenziselwe ukurisayikilishwa okanye ilahlwe.
• Ukunciphisa iindleko zokurisayikilisha okanye zokulahla.
Oomasipala bengingqi bakwafumana izibonelelo zoqoqosho xa iinkampani zitshintshela kwipakethe yezothutho ezinokusetyenziswa kwakhona. Ukuncitshiswa komthombo, kubandakanya nokusetyenziswa kwakhona, kunokunceda ukunciphisa ukulahlwa kwenkunkuma kunye neendleko zokuphatha kuba kuthintela iindleko zokurisayikilisha, ukufaka umquba kumasipala, ukugcwaliswa komhlaba kunye nokutsha.
Ukusetyenziswa kwakhona sisicwangciso esiliqili sokuxhasa iinjongo zokuzinza kwenkampani. Umxholo wokuphinda usetyenziswe uxhaswa yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo njengendlela yokuthintela inkunkuma ekungeneni kumjelo wenkunkuma. Ngokwe-www.epa.gov, “Ukuncitshiswa kwemithombo, kubandakanya nokusetyenziswa kwakhona, kunokunceda ukunciphisa iindleko zokulahlwa kwenkunkuma kunye nokuphatha kuba kuthintela iindleko zokurisayikilisha, ukufaka umquba kamasipala, ukugcwaliswa komhlaba, kunye nokutsha. Ukuncitshiswa kwemithombo yolondolozo kukwalondoloze izibonelelo kwaye kunciphise nongcoliseko, kubandakanya nokugcwala kwendalo okunegalelo kufudumo lwehlabathi. ”
Ngo-2004, i-RPA yaqhuba uPhononongo loHlahlelo loMjikelo woBomi kunye neFranklin Associates ukulinganisa iimpembelelo zokusingqongileyo kwizikhongozeli ezinokuphinda zisetyenziswe xa kuthelekiswa nenkqubo ekhoyo enokuchithwa kwintengiso yemveliso. Izicelo ezilishumi zemveliso esandul Ezo ziphumo zixhaswe luphononongo oluninzi olulandelayo. Kwinkoliso yezicelo iinkqubo zokuphinda zisebenze zothutho zikhokelela kwezi mpembelelo zilandelayo zilungileyo kokusingqongileyo:
• Ukuncitshiswa kwesidingo sokwakha iindawo zokulahla ezinexabiso eliphezulu okanye iindawo zokulahla inkunkuma ezingaphezulu.
• Inceda ukuhlangabezana neenjongo zokuphambukisa inkunkuma kurhulumente nakwiphondo.
• Ukuxhasa abahlali bendawo leyo.
• Ekupheleni kobomi bayo obuluncedo, uninzi lwezinto ezinokuphinda zisebenze zingaphathwa ngokurisayikilisha kweplastikhi kunye nentsimbi ngelixa zisila iinkuni zokwenza imbonakalo yomhlaba okanye imandlalo yemfuyo.
• Ukuncitshiswa kokukhutshwa kwegesi egreenhouse kunye nokusetyenziswa kwamandla ngokubanzi.
Nokuba iinjongo zenkampani yakho kukunciphisa iindleko okanye ukunciphisa umda wendlela yokusingqongileyo, ukupakishwa kwezothutho kwakhona kunokubangela ukuba ujonge.